Row Formestane (566-48-3) HPLC ≥98% | AASraw
/ Products / Ny hafa / Formestane (566-48-3)
SKU: 566-48-3. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny baikom-pandaminana ny Formestane (CAS 566-48-3), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Formiwan oiwder dia ny selekta voalohany, karazana I, tohibitor steroidal aromatase ampiasaina amin'ny fitsaboana kanseran'ny nono estrogen-receptor ao amin'ny vehivavy menavava. Formestane dia manafoana ny famokarana estrogen avy amin'ny steroids anabolic na prohormones. Izy io koa dia miasa toy ny prohormone amin'ny 4-hydroxytestosterone, ...
Endrika fototra karazana
Formestane (566-48-3) ampiasaina amin'ny tsingerim-pandaminana
Formestane (566-48-3), antsoina koa hoe lentaron, anarana simika: 4-hydroxyandrostenedione.
Formestane (566-48-3) Usage
Ny dikan-teny nalaza indrindra amin'ny fivarotam-boankazo novolavola dia tao anatin'ny endriky ny gel ary napetraka tao amin'ny 100-200mgs isaky ny fampiharana. Ireo mpampiasa dia hampihatra izany amin'ny hoditra madio sy maina ary hikolokolo tsara; matetika eo amin'ny feny na ny sandry ambony. Naka 1 hatramin'ny 5 minitra ny maina. Ny votoatin'ny injectable ho an'ny kanseran'ny nono sy bodybuilder dia 125mgs indroa isan-kerinandro na 250mgs indray isan-kerinandro.
Fampitandremana amin'ny Formestane
Formestane (CAS 566-48-3) dia tsy miteraka zavatra maro raha tsy ampijaliana. Indraindray ny bandy dia hitaraina amin'ny fiakaran'ny hafanana, ny fikorontanan'ny toetr'andro, ny fiovan'ny libido, na ny fako, izay mahazatra ny AI rehetra. Ny vokatra hafa dia fihenan'ny HDL (tsara) cholesterol, noho izany dia mila mijery ny sakafo ianao.
Formestane dia taranaka faharoa, irreversible, tohibitor aromaretina mahazatra. Manakana ny enzyme aromatase tompon'andraikitra amin'ny famolavolana androgenes amin'ny estrogens izany, ka manakana ny famokarana estrogen.
Ny kanseran'ny nono dia mety ho mavesatra na tsy misy dikany. Ny ankamaroan'ny kanseran'ny nono dia estrogen sensitive. Ny sela Estrogen voan'ny kanseran'ny nono dia miankina amin'ny estrogen noho ny fahatanterahana. Noho izany, ny fanesorana ny estrogen avy amin'ny vatana dia mety ho fitsaboana mahomby amin'ny hormone kanseran'ny hormonina.
Ny endriky ny endriky ny taovam-pananahana dia natao manokana ho an'ny fitsaboana vehivavy vehivavy. Tsy toy ny vehivavy mihetsiketsika izay mamoaka fatran'ny estrogen indrindra ao amin'ny ovaire, ny vehivavy mitaiza vehivavy dia mamoaka fatrany lavitra indrindra amin'ny fiterahana amin'ny alàlan'ny tsindrona aromatase. Ny Formestane (566-48-3), mpandoka aromatasina, dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny famokarana estrôgana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanakanana ny enzyme aromatase amin'ny fiterahana (ie, ny tissue ny nono) mba hikarakarana voan'ny kanseran'ny hormone.
Ahoana no hividianana Formestane avy any AASraw
Hydroxyprogesterone kapaoty vovoka